के तपाईंको व्यापार गर्न सीमा सेट ... विज्ञापन कहीं तपाईं चाहनुहुन्छ।
संसारको कुनै पनि भाग देखि ग्राहकहरु आकर्षित
आफ्नो पहुंच र व्यापार जागरूकता गुणन
एम सबै क्याच '- आफ्नो बिक्री विस्तार!
हाम्रो Google Ads पहिलो हुन जान्नुहोस् Google Ads अनुवादक तयार छ र चलिरहेको छ!
दर्ताको लागि धन्यबाद! हामी यो उत्पादन उपलब्ध छ रूपमा बित्तिकै सम्पर्क गर्नेछौं।
केहि गलत भयो। फेरी प्रयास गर्नु होला।
ओहो केही गलत भयो! अर्डर दर्ता गर्न एक वैध इमेल टाइप गर्नुहोस्।
Clever Ads तपाईको Google Ads कुनै पनि भाषामा नि: शुल्क अनुवाद गर्दछ
आफ्नो प्राथमिकता चयन
Google Ads चयन गर्नुहोस् Google Ads अभियानहरू तपाइँ अनुवाद गर्न चाहानुहुन्छ र कुन भाषाहरूमा।
आफ्नो दैनिक बजेट चयन
तपाईको नयाँ अनुवादित Google Ads लागि व्यक्तिगत बजेट सेट गर्नुहोस् Google Ads अभियानहरू।
र तपाईं जाने!
तपाईंको नयाँ Google Ads र तपाईंको Google Ads चालु Google Ads खाता!
विजयी नयाँ दुनिया
Clever Ads तपाइँलाई कसैलाई पनि पुग्न अनुमति दिनेछ
हामी कुनै पनि Google Ads अनुवाद गर्न सक्षम छौं Google Ads विश्वव्यापी कुनै पनि अवस्थित भाषामा अभियान खोजी गर्नुहोस् (ल्याटिन स्पिकरहरूका लागि माफ गर्नुहोस्)।
जहाँसुकै र जहाँसुकै तपाईंको व्यवसायको विज्ञापन गर्नुहोस्। तपाईं चाहानुहुन्छ अमेरिका, चीन, मेक्सिको, रूस, वा ती सबै एकै पटकमा। आकाश सीमा हो र छनौट तपाईंको हो!
तपाईं अन्तिम शब्द छ
तपाईंको अनुवादित Google Ads अभियानहरू तपाईंको Google Ads अपलोड गर्नु अघि Google Ads खाता र ती प्रत्येकको लागि व्यक्तिगत दैनिक बजेट सेट गर्नुहोस्।
अनुवाद समीक्षा र अनुकूलन गर्न को लागी तपाईको ब्यापार आवश्यकताहरु लाई उचित बनाउन को लागी सक्षम हुनुहोस्।
किन Clever Ads अद्वितीय Google Ads अनुवादक प्रयोग गर्दछ?
हामी अद्वितीय हुनुहुन्छ
Clever Ads केहि कम्पनिहरु मध्ये एक हो जसले तपाईलाई तपाईको व्यवसायको सचेतना बढाउन अनुमति दिनेछ तपाईको उत्पादन वा सेवाहरू बिक्री गर्दा, कुनै मूल्य बिना। कसैलाई पखेटा काट्न नदिनुहोस्, जहाँ तपाईं आफ्नो विज्ञापन अनुवाद गरेर पुग्न चाहनुहुन्छ, Clever Ads यहाँ मद्दतको लागि छ।
के कसैले स्वतन्त्र भन्यो? तपाईंले यो सही सुन्नुभयो। तपाईंले आफ्ना नयाँ अभियानहरूको लागि छनौट गर्नुभएको बजेट पूर्ण रूपमा तपाईंको Google Ads खर्च हुनेछ Google Ads । तपाइँ प्रति क्लिक मात्र भुक्तान गर्नुहुन्छ।
पूर्ण Google Ads अभियान अनुवाद एक पेशेवर अनुवादक को लागी केहि घण्टा वा दिन लाग्न सक्छ, तपाईं Clever Ads संग सेकेन्ड भित्र स्वचालित रूप बाट अनुवाद गर्न सक्नुहुनेछ।